शिक्षा विकासमा व्यावस्थापन र शिक्षा संकायमा कक्षा सुरु -
शिक्षा विकासमा व्यावस्थापन र शिक्षा संकायमा कक्षा सुरु
२४ श्रावण २०७६, शुक्रबार २२:२० August 9, 2019 mophasalLeaveaComment on शिक्षा विकासमा व्यावस्थापन र शिक्षा संकायमा कक्षा सुरु
साउन २४ गते, दलेली । मोरङ कानेपोखरी–२, दलेलीमा रहेको शिक्षा विकास माध्यामिक विद्यालयले यस शैक्षिक सत्रदेखि व्यवस्थापन र शिक्षा संकायमा कक्षा ११ सुरु गरेको छ ।
कक्षा सुरु सँगै अरु विद्यालयको तुलनामा पनि विद्यार्थीको चाप उस्तै रहेको छ । यो सँगै वडा नं. २ का वडाध्यक्ष सुशिल बुढाथोकीको जनप्रतिनिधि भएर आएदेखिको सपना पुरा भएको छ ।
विपन्न वर्ग ऋषिदेव,सतार र राजवंशीको बढी बसोबास रहेको क्षेत्रलाई लक्षित गरेर शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गरेको वडाध्यक्ष बुढाथोकीले बताए । व्यवस्थापन र शिक्षा संकायमा कक्षा सुरु गरेको हो । विषयगत दक्ष र तालिमपाप्त शिक्षकहरु रहेको विद्यालयमा अहिले ४० भन्दा वढी विद्यार्थीले इन्ट्रान्स लिएर पढाई सुरु गरिसकेका छन् । दुवै कक्षा विहान ६ बजे देखि हुने भएकोले आधा दिन पढ्ेर आधा दिन घरको काम भ्याईने विद्यार्थीहरु बताउँछन् ।
यस अघि विपन्न वर्ग ऋषिदेव,सतार र राजवंशी जातीहरुका विद्यार्थीहरुको पढाई एसईई सम्म मात्र हुने गरेको थियो । पैसा हुनेले पनि यस ठाउँबाट कक्षा ११पढ्न ५ देखि १० किलो मिटर टाढा सम्म धाएर पढ्नु पर्ने बाध्यता थियो तर अव भने त्यो हटेको छ । अव उनिहरुले कक्षा १२ सम्म घरबाटै घाएर पढ्ने अवसर मिलेको वडाध्यक्ष बुढाथोकीले बताए ।
यस आर्थिक बर्षमा वडा नं. २ ले ५ लाख बराबरको छात्रवृती वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । कक्षा ११ र १२ संचालनमा आर्थिक स्रोत नै ठुलो कुरो भएकोले आर्थिक स्रोत जुटाएर गुणस्तरीय शिक्षा दिने तयारीमा रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोपाल बहादुर कार्कीले बताए । आर्थिक श्रोत व्यवस्थापनमा गाउँपालिकाले शिक्षामा गर्ने लगानी यहाँ गर्नुपर्यो र वडा नं. २ र प्रदेश सरकारबाट गर्ने वडाध्यक्ष बुढाथोकीले बताए ।
शिक्षा विकास माविमा कानेपोखरी गाउँपालिकाका वडा नं. १,२,३ र रंगेली नगरपालिकाको वडा नं. ८ र ९ बाट विद्यार्थीहरु अध्यान गर्न आउने विद्यालयका प्राचार्य रुद्र निरौलाले बताए । २०३६ सालमा स्थापना भएको विद्यालयमा २०५४ साल देखि एसएलसीको परीक्षा दिन सुरु गरेको थियो ।
लायन्स क्लबद्रारा ३१ घर बाढी पीडितलाई राहत वितरण
नेकपाको काम अधिकार प्राप्तिको लडाईको नभई कर्तव्य पालनाका हो – अध्यक्ष धिमिरे
पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको केन्द्र र नामको विवाद कायमै
१६ श्रावण २०७५, बुधबार ०७:४४ August 1, 2018 mophasal
पाठ्यपुस्तक बिना नै परीक्षामा बस्दै विद्यार्थी
३० फाल्गुन २०७२, आईतवार १५:२८ March 13, 2016 wwwmophasal
संचारकर्मी त्रिलोचन कोइरालाको निर्देशनमा बनेको म्युजिक भिडियो सार्बजनिक (भिडियो सहित )
२३ जेष्ठ २०७३, आईतवार १६:१७ October 12, 2016 wwwmophasal